samsung galaxy s6 inoshanda vs samsung galaxy s6
Kuru Nhau & Ongororo Samsung Galaxy S6 Inoshanda vs Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6 Inoshanda vs Samsung Galaxy S6
Kunaka ihwo hunhu hunokatyamadza hunosimudzira Samsung pane chimwe nechimwe chigadzirwa chigadzirwa chinouya nekambani. Kuve mumwe wemasimba ekutanga muindasitiri yeAppleam, Sammy akabuda zvese gore rino nekuburitswa kwayo foni mureza, iyo Samsung Galaxy S6, iyo yakashamisa vazhinji, yakaenda kunzira nyowani nyowani nekugadzirwa kwefoni yayo. Ichidurura mukurumbira wayo wepakutanga, iyo S6 yakaratidza kuvatsoropodzi kuti Samsung ine zvazvinotora kuti ive nyowani kana zvasvika pamagadziro efoni.
Nepo dhizaini yekutanga yeS6 ichidikanwa, inodonhedza mhando yemvura yekumutangira - asi, icho & rsquo; chimwe chinhu icho & rsquo; chakakurumbira mukutarisana kwakazara neazvino Samsung Galaxy S6 Active. Kunyangwe iwo mapepa emafoni efoni ari maviri akafanana, iwo ekugadzirwa dhizaini akasiyana zvakanyanya. Izvo, chokwadi, ndizvo zvinoita sarudzo yekutora imwe yakatonyanya kuoma. Uchirangarira izvo mupfungwa, ndeipi yaunofanira kuenda nayo? Iyo yekutanga dhizaini yeGirazi S6, kana iyo isingapindike kuvakwa kweS6 Inoshanda?
Sezvo isu & rsquo; taura zvakajeka, Samsung & rsquo; s gwara nyowani rinonyatso kuoneka neGPS S6 & rsquo; s zvine hungwaru, dhizaini yekutanga. Kutaura chokwadi, zvinongobika kune izvo zvinokufadza zvakanyanya. Chokwadi, iyo S6 inoenzanisira zvese zvatiri kuda mune yepamusoro-kumagumo foni, saka zvinoreva muviri wakasimba uyo & rsquo; s inoumbwa nesimbi negirazi - yakaitwa zvirinani nekuvhenekerwa kwechiedza nemashiripiti pamusoro payo. Imwe yenyaya dzekuita neyekutanga dhizaini, hazvo, ndeyekuti & rsquo; inowedzera kusimba uye inokanganisa kukuvara kwakakomba kana iyo & rsquo; s yadonha.
Hazvishamisi kuti izvo & rsquo; haisi nyaya neGlass S6 Active, iyo inogona kuve nemaziso ekugadzira zvichienderana nekuti waunotaura naye ndiani, asi iri & rsquo; s rinoshanda pane fomu. Mitambo ine IP68 chiyero, iyo S6 Active inoitwa kuti irwise zvese izvo hupenyu hunogona kuburitsa - saka & rsquo; s mvura inopesana, proof guruva, uye kushamiswa kusagadzikana. Kukuvadza hakusi & rsquo; t mumutauro weiyo S6 Inoshanda, uchiona kuti kuvaka kwayo-senge-tangi kuvaka kunovimbisa iyo & rsquo; s isingapindike.
Kunyangwe hazvo iwo maviri mairi IR blasters, yakavakirwa-mukati isina waya yekuchaja, uye yemoyo maseru, iyo S6 inobatsira kubva pakuva nekuchengetedzeka kwepamusoro uye rutsigiro rwezvifambiso zvemafoni nekutenda kune yayo yeminwe sensor - nepo iyo S6 Inoshanda iine epanyama Android mabhatani uye yakakwira huremu bhatiri sero.
Samsung Galaxy S6 Inoshanda
Ona iyo yakazara Samsung Galaxy S6 Active vs Samsung Galaxy S6 saizi yekuenzanisa kana kuenzanisa ivo kune mamwe mafoni vachishandisa yedu Saizi Kuenzanisa chishandiso.
Kuputsa mukurumbira wekare wekuti tekinoroji ye AMOLED yaive nayo munguva yakapfuura, sekuzadzwa zvakanyanya uye kukundwa mumamiriro akajeka, Samsung zvakare yakatishamisa nekukwirisa skrini ye AMOLED - uye nhare mbiri idzi dzinoratidza kuti hapana imwe! Muchokwadi, ivo & rsquo; vachiratidzira iyo yakafanana skrini, 5.1-inch 1440 x 2560 Quad-HD Super AMOLED kuratidza.
Sekuona, maziso edu anounzwa nezvikwiriso zvakapfuma zvakadzama, zvine simba mukujeka, zvine makona akawandisa ekuona, uye mavara anopopota kufadza. Icho chinhu chimwe chete kuisa zvinhu nemaziso edu, asi pane musiyano uripo pakati pezviviri - hazvo, & rsquo; s kwete nezvakawanda. Semuenzaniso, iyo S6 uye S6 Inoshanda & rsquo; s kupenya kwekubuda kuyera kwakatenderedza 570 nits, ichivaita kuti vaoneke mune kunyangwe kupenya kwechimiro. Uye haina & rsquo; hazvingagumire ipapo!
Kunyanya, iwo tembiricha yavo yemavara inowira mukati meyakanyanya padhuze kusvika pakukosha kwakakwana kwe6500 K. Pakutanga, ma AMOLED ave achizivikanwa kuti anogadzira zvisingaite, zvakazara-mavara, asi izvi zviviri zvinoratidza kuti & rsquo; s haisisiri iyo nyaya. Muchokwadi, kana ivo & rsquo; vadzosera ku & lsquo; basic & rsquo; kuratidza modhi, ivo vanonyatso kubereka mavara muiyo sRGB spectrum kara chati. Chinhu chega chakasiyana pano, kubva pane zvatinoona, ndeimwe mhando yekurapa yakashandiswa kuS6 Active & rsquo; s skrini inodzosera mvura zvirinani.
Idzo nhamba dziri pazasi dzinomiririra huwandu hwekutsauka munzvimbo dzakatarisana, dzinoonekwa kana chiratidziro chatariswa kubva pa45-degree angle zvichipesana nekuona kwakananga.
Kunonyanyisa kupenya Pazasi zviri nani
Kupenya kushoma Pazasi zviri nani
Kusiyanisa Pazasi zviri nani
Kupisa kwemavara Pazasi zviri nani
Gamma Pazasi zviri nani
Iyo CIE 1931 xy ruvara gamut chati inomiririra iyo set (nharaunda) yemavara iyo inoratidzwa inogona kubereka, iine sRGB colorpace (iyo yakaratidzwa katatu) inoshanda sereferenzi. Iyo chati inopawo inomiririra inomiririra yekuratidzira & apos; s kurongeka kwemavara. Iwo madiki makwere akayambuka miganho yetriangle ndiwo mareferenzi emavara akasiyana siyana, nepo madiki madiki ari iwo chaiwo matanho. Sezvineiwo, dhoti rega rega rinofanirwa kuve rakamisikidzwa pamusoro penzvimbo yaro. Iyo 'x: CIE31' uye 'y: CIE31' kukosha mutafura pazasi pechati kunoratidza chinzvimbo cheyero imwe neimwe pachati. 'Y' inoratidza kuvhenekera (mune nits) yemuvara wega wega wakayerwa, nepo 'Target Y' iri chiyero chinodiwa chekuvhenekera iro vara. Chekupedzisira, 'ΔE 2000' ndiyo Delta E kukosha kwemuvara wakayerwa. Delta E tsika yepazasi pe2 yakanaka.
wedzera hurongwa hwemagetsi iphone verizon
tarisa apuro chiitiko live kutenderera
inoita facebook messenger compress photos
Samsung Galaxy S5 Active (AT & T musiyano) sezviri pachena yakaratidzwa muvhidhiyo
Kana yako Apple Watch bhatiri iri kukasira nekukurumidza zvakanyanya, heino mhinduro
AT & T kuuya ne4 meseji mameseji uye matatu matsva masevhisi
Mophie anozivisa Juice Pack akawedzera mabhatiri kesi yeiyo iPhone 6 uye 6 Plus
Galaxy Note 10 uye 10+ zviri pamutemo: mutengo, zuva rekuburitsa, uye zvese zvitsva maficha
Tech21 & apos; s iPhone 7 kesi dzinoisa chengetedzo kumusoro kwavo kwekutanga runyorwa